Binance NFT Musika: Kuunganidzwa naAndy Warhol, Salvador Dalì - Cazoo
musha » musha » Binance NFT Musika: Kuunganidzwa naAndy Warhol, Salvador Dalì
Tag: NFT, Asina fungible tokeni
ari NFT (Zvisingaonekwe Zviratidzo) vakunda nyika. Kunze kwekunge iwe uchigara mubako, apo wifi inotora zvakashata kwazvo, iwe watove wakanzwa nezveiri rinobuda kirasi nyowani yezvinhu zvemadhijitari.
Iyo Binance kuchinjana (pano batanidza ivo kunyorera nekomisheni dhisikaundi! - mutepfenyuro unoshanda sei?iri kuvhura musika wayo weasina-fungible chiratidzo nhasi, China 24 Chikumi, ine premium auction iyo icharatidza NFTs yemabasa maviri ehunyanzvi naAndy Warhol naSalvador Dali.
Andy Warhol Matatu Kuzvimiririra Mifananidzo Binance NFT
Iyo okisheni, inonzi "Genesisi", ichave neNFT yeAndy Warhol's "Zvitatu Zvirikuzvionera", pamwe neNFT ichangobva kudhindwa yeSalvador Dali's "Divine Comedy: rebeget". Sekureva kwekuburitswa kwenhau, dingindira remushamba uyu rinotarisira kuvhura "fungu idzva reRenaissance neNFTs".
"Tekinoroji yeNFT yakashandura hunyanzvi hwepasi rose nekusingaperi, kuunza pfungwa yehudhi hwemadhijitari kune hupenyu hwakareba hupenyu kekutanga ", inoverenga chishambadziro. "Okisheni yaGenesisi inomiririra pfungwa iyi uye inotakura zvidimbu zviviri zvakakosha zvinomiririra nguva dze 'mhepo yeshanduko' munhoroondo".
Okisheni icharatidzawo yekutanga "Mystery Bhokisi”YaBinance NFT, nzira nyowani yevashandisi yekuwana akakosha NFTs. Bhokisi rega rega rakavimbiswa kubata NFT, uye zvirimo zvinogona kusiyana mukushomeka. Yekutanga Yakavanzika Bhokisi muunganidzwa ichave iine 16 "tokidoki" mavara, matoyi akafuridzirwa nemararamiro eJapan, akagadzirwa muna 2006 nemuItaly muimbi Simone Legno.
Iyo okisheni chikamu cheBinance ichangobva kuziviswa "100 Vagadziri" chirongwa, icho chine zana maartist akasarudzwa kutungamira kuvhurwa kwemusika weNFT. Ivo chete vakasarudza vagadziri ndivo vanozogona kutengesa yavo mifananidzo muvhiki yekutanga mushure mekutanga kwemusika.
Binance yakazivisa kuti iri kuvhura musika wekugadzirwa kweNFT nekutengesa pakupera kwaKubvumbi gore rino, ichizviti "danho rekufambisa" kuti riwedzere kuzvipira kwaro tekinoroji yeNFT.
“Tine chinangwa chekuvaka iyo yakakura NFT yekutengesa chikuva pasi rose kuburitsa mhinduro dzinokurumidza, dzakachipa uye dzakachengetedzeka zvikuru dzeNFT dzinofambiswa neyakavakirwa blockchain nenharaunda yeBinance, ”mutauriri wekambani akaudza The Block.
Zvese zvakanyorwa mabasa zvinogona kuwanikwa pa Binance NFT Musika.
Izvo vazhinji vari kushamisika ndezvekuti kuvhurwa uku kuchakanganisa chiratidzo cheBinance, iyo BNB. Iko kufarira kuri pamberi pekutanga uku kuchawedzerawo kukosha kwechiratidzo ichi?
TENGA BNB MARI PABHINALI
Nyaya yapfuuraMashandiro eSorare, yepasirose nhabvu nhabvu inomhanya paEthereum